Paul Mooneys Sons na -ekwu okwu mmetọ mmekọahụ megide nna ha - Pop Culture
Paul Mooneys Sons na -ekwu okwu mmetọ mmekọahụ megide nna ha
Vidiyo pụọ Egwuregwu Hype
Ịdenye aha na Youtube
Ụmụ ejima Paul Mooney na -akpọ BS maka ebubo mmeko nwoke megide nna ha.
onye na -egwu max na ụgbọ mmiri ojii
N'ajụjụ ọnụ a na nso nso a Egwuregwu Hype , Daryl na Dwayne Mooney kwupụtara ebubo na onye ome nto ochi ahụ 'emebila' nwa Richard Pryor ihe karịrị afọ 30 gara aga. tụlee itinye nde $ 1 na Mooney. Kahn kwusiri ike, na onye bụbu onye isi ya emebeghị ihe n'echiche a.
'Site na Jo Jo Onye egwu  na -aga, mmekọrịta ha ghọrọ nke na -esighị ike n'ihi na Paul Mooney agbakọla nwa Richard n'oge ahụ, 'Kahn gwara Comedy Hype ọtụtụ izu gara aga. '... Yabụ site ebe ahụ gaa n'ihu, ihe ọ bụla Paul Mooney bụ Richard, na enwere oge mgbe Paul Mooney bụ enyi Richard (...) yabụ mgbe Paul mere ihe ọ mere ọ bụ imebi ọbụbụenyi, nke mbụ, mgbe ahụ nwa m nwoke. Na ụfọdụ okirikiri nke ekwesịrị ka emee ya. '
Mooney ekwubeghị okwu asịrị a n'ihu ọha n'ihi na, dị ka ụmụ ya nwoke siri kwuo, ọ maghị na e nwere asịrị.
'Paul Mooney anaghị ezo ezo. Paul Mooney adịghị mma, 'Dwayne kwuru. '... Ọ maghịdị ihe na -eme ugbu a, yana ihe a niile Richard Pryor. Ọ chọghị ikwu okwu na ya. Anyị na -ekwu maka ya. Anyị bụ ụmụ ya ndị okenye ... '
Brothersmụnne ahụ gọnarịrị akụkọ na ọrịa ọgbụgba gigụ nke Mooney n'oge na -adịbeghị anya nwere ihe ọ bụla metụtara ebubo Kahn, na -ekwusi ike na nna ha kwesịrị ịpụ na mmemme ahụ n'ihi nsogbu ahụike.
'Nzaghachi m bụ' Fuck you, '' Daryl kwuru. 'Rashon, fuck gi. Ọ dị mma, na -apụta na ụdị oke egwu dị ka nke a mgbe Pọl na -arịa ọrịa, mgbe ọ meworo agadi. Ọ bụrụ na ihe ahụ na -ekpo ọkụ, ị kwesịrị ịgwa ya na afọ gara aga. Richard Pyor Jr. ekwughị ihe ọ bụla gbasara ya, yabụ kedu ihe ị ga -eji gwa azụmahịa onye ọ bụla.
otu esi etinye eriri ikuku 1
N'oge na -adịghị anya ajụjụ ọnụ Kahn pụtara, TMZ jụrụ Richard Jr. gbasara mwakpo mmeko nwoke na nwanyị. Richard Jr. akpọghị Mooney aha kpọmkwem, mana ọ tụrụ aro na mmebi ahụ mere: 'Ihe ọ bụla mere na ndụ m, ọ mere mgbe m bụ nwata. Ụzọ tupu '80s.'
Onye na -ese foto gara n'ihu jụọ ya ma ọ bụrụ na mmekọrịta ya na Mooney nwere nkwekọrịta, nke ọ zara, sị: 'Olee otu mmekọrịta ọ bụla ga -esi kwenye ma ọ bụrụ na m dị afọ iri na ụma?'
Ụmụ ejima Mooney kwenyere na Richard Jr. enwetabeghị ebubo Kahn, ebe ọ na -akpọtụghị aha nna ha n'oge obere okwu ya na TMZ.
'Ọ bụghị nke ọ bụla bụ eziokwu. Ọ bụ ụgha niile. Ọ bụ asịrị niile, 'Daryl kwuru. 'Ruo mgbe Richard Pryor Jr. rutere na efere wee sị na mmadụ mere ihe, mgbe ahụ ọ bụ eziokwu. E wezụga nke ahụ, ọ bụ naanị asị ... Ọ bụrụ na nke a mere, afọ ole ka ọ dị? Ị sị na ọ bụ obere nwa, mana ị sị na usoro iheomume dị iche. Ọ bụ 19? Ọ dị afọ 20? Ruo mgbe Richard Pryor Jr. ga -apụta na ya, anyị amaghị - Amaghị m. 'Mee ka ndị mmadụ nwee ike ikwu okwu ọjọọ ọbụla, ọkachasị ị kpọrọ mmadụ asị.'
Daryl wee jiri ọnọdụ ahụ tụnyere ebubo mmeko nwoke megide Michael Jackson na Bill Cosby.
Ọ sịrị, 'Lee ihe ha na -eme ndị isi ojii a mgbe ha mepụtara ihe nketa. 'Mgbe ahụ, na mberede, ha na -eme okenye, onye chọrọ ịgbawa wee mebie ihe nketa ha. Ị na-egwu egwu? Ihe nketa ahụ siri ike nke ukwuu ibibi ọ gwụla ma ị na -abịa ihe dị adị wee nweta ihe akaebe banyere ya, 'kpatara ihe ọzọ karịa nke ahụ, ị ​​na -ekwu naanị ihe nzuzu.'
You nwere ike ịnụ nkọwa Daryl na Dwayne dị n'elu.
kedu agwo bu nagini
ọcha achicha uzommeputa na achicha ntụ ọka